Tourism Macao weputara Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Mba Nile
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Tourism Macao weputara Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Mba Nile
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ mgbasa ozi Macau • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Mkpakọrịta ọhụrụ na Tourism Macao ga-egosipụta ebe kachasị mma iji chọpụta ma nwalee ọpụrụiche mpaghara. Tourism Macao bụ onye ọhụụ na-aga ebe ọ ga-enyere ndị na-ege ntị aka ịmata ihe gbasara ọdịnala na ntanetị nke ntanetị.
Culture Culture na-egosi ndị bịara abịa ihe pụrụ iche na pụrụ iche banyere ebe dịka Macao.
Njem Omenala, ịmalite ịmalite ụwa na-eto ngwa ngwa ekwuputala mmekorita ya na Tourism Macao iji kwalite ndị ọbịa dị iche iche nke Macau site na mkpọsa mgbasa ozi dijitalụ mba ụwa. Dị ka akụkụ nke mkpọsa ahụ, Culture Trip ga-akọ akụkọ banyere ọdịbendị na ọdịbendị na-adọrọ mmasị nke Macau site na vidiyo mbụ, edemede foto na edemede gafee weebụsaịtị weebụsaịtị na ngwa. Mmekọrịta ahụ ga-egosiputa ebe kachasị mma iji chọpụta ma nwalee ọpụrụiche mpaghara. Tourism Macao bụ onye ọhụụ na-aga njem na-arụ ọrụ na Culture Trip, na-enyere ndị na-eduzi ihe ọmụma dị n'ịntanetị aka iru ndị na-ege ntị na omenala.
Culture njem na-eji okike na teknụzụ eme ihe kpalie ma mee ka ndị mmadụ nwee ike inyocha ọdịbendị gburugburu ụwa. Ọhụụ ụlọ ọrụ ahụ bụ iweta ụwa niile na ime nke a mee ka anyị niile bịarukwuo nso. Na-adọta ndị ọbịa 18 nde pụrụ iche kwa ọnwa na weebụsaịtị ya kwa ọnwa, ọ nwekwara mgbasa ozi mmekọrịta na-esote ihe karịrị 7 nde. Ihe vidiyo ya emeela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri 2 na ngwa ya ka ebudatara ugboro nde 1.3.
“Obi dị anyị ụtọ na anyị na Macao Tourism na-arụ ọrụ iji gosipụta onyinye ndị ọbịa nke Macau na-enye dị ka naanị Omenala Njem nwere ike, site na ọdịnaya ọdịnaya anyị mbụ na-enye nghọta banyere ọdịbendị mara mma nke mpaghara ahụ ma na-egosipụta ọmarịcha ebe ndị dị na mpaghara iji nwaa tarta Portuguese ma ọ bụ ọkụkọ Africa. ”Kwuru Dick Soule, Chief Revenue Officer na Culture Trip. “Culture njem bụ ihe niile banyere -ekere òkè ihe pụrụ iche na pụrụ iche banyere a ebe; mmekorita a bu ezigbo ihe atu nke otu anyi nwere ike isi nyere aka na-agwa ndi ozo ha ihe ha gha abia, site na ihe ndi ozo.
Maka ileba anya na ihe okike nke Omenala Njem mepụtara, biko gaa saịtị ahụ.